Singa famolavolana mailaka miisa 5 mampitombo ny tahan'ny Click-Through | Martech Zone
Talata, Oktobra 13, 2015 Douglas Karr
Tsy azoko antoka fa misy zavatra mahasosotra kokoa noho ny fandefasana mailaka ary ny fiantohana fa mandaitra izany na ny fifandonana rehetra dia azo tanterahina amin'ny mpanjifa mailaka rehetra. Tena mila manana fenitra amin'ny fampandehanana mailaka ny indostria tahaka ny nahombiazany tamin'ny mpitety tranonkala. Raha manokatra mailaka voaorina tsara sy mamaly ianao izay hita fa tsara manerana ireo mpitety dia ho hitanao ny filaharana hack hack hodgepodge mba hiasa sy ho tsara araka izay azo atao. Ary na eo aza izany dia hanananao mpanjifa iray mampiasa mpanjifa taloha izay tsy manome fanampiana. Ny fandraketana ny mailaka dia nofy ratsy.
Fa ny mailaka dia toy izany fitaovana marketing mahomby. Ny zava-misy nisoratra anarana ny mpanjifa na ny mpanjifa, manasa anao handefa hafatra - amin'ny fandaharam-potoananao - dia mahery tokoa. Ny mailaka dia manohy hatrany ny lisitr'ireo fantsom-barotra mahomby indrindra toa ny efa am-polony taona mahery. Araka ny tatitra iray avy amin'ny Mailchimp:
73% amin'ireo mpivarotra no manaiky fa ny marketing amin'ny mailaka no ivon'ny asany.
60% -n'ny mpivarotra no manambara fa ny mailaka dia mampandeha ny vokatra sy serivisy, ary 42% ny mpivarotra amin'ny 2014.
20% amin'ireo mpivarotra no milaza fa ny loharanom-bolan'ny orinasa voalohany dia mifamatotra mivantana amin'ny asan'ny mailaka.
74% amin'ireo mpivarotra no mino fa ny mailaka dia mamokatra na hamokatra ROI amin'ny ho avy.
ROI tsara kokoa? Ahoana no ahatongavan'izany? Ankoatra izany, ankoatry ny maha-izy azy manokana sy mandeha ho azy, dia misy ihany ny fotoana ahafahana mampitombo ny fifandraisan-davitra amin'ny alàlan'ny singa mifandray izay mandroso ny tahan'ny click-through sy ny fahazoana heno amin'ny mailakao efa misy. Ny mailaka Monks dia mihevitra ny mailaka ho toy ny microsite ifandraisana, azo alaina eo am-pelatananao amin'ny alàlan'ny fitaovanao finday. Nanome singa miisa 5 mifampitohy sy tohana ao amin'ny sary vaovao izy ireo Fiterahana indray ny mailaka: Mikraoba azo alefa dia anarana vaovao.
karazan-tsakafo - Fantatrao ve fa afaka manafina sy mampiseho menus amin'ny alàlan'ny CSS amin'ny mailaka ianao? Click Eto ho an'ny santionany.
Accordians - Amin'ny fampiasana CSS mitovy amin'ny fanafenana sy fampisehoana menus, azonao atao ihany koa ny manafina sy mampiseho atiny, mametraka ny lohateny bebe kokoa amin'ny fitaovana finday. Click Eto ho an'ny santionany.
Scratch sy Flip - Apple Mail sy Thunderbird dia manohana ny fifandraisana eo amin'ny hover, manome fotoana iray hanehoana tsikelikely ny atiny ao amin'ny mailakao. Click Eto ho an'ny santionany.
GIF mihetsika - Araka ny Email Institute, Animated #GIF #emails dia mampitombo ny tahan'ny click-through hatramin'ny 26% ary afaka mampiakatra ny tahan'ny fiovam-po hatramin'ny 103%! tsindrio Eto ho an'ny santionany.
#Video Ankehitriny dia tohanan'ny 50% mahery ny mpanjifa #email ary afaka mizaka ny ROI hatramin'ny 280% noho ny mailaka nentim-paharazana. tsindrio Eto ho an'ny santionany.
Tsindrio ny infographic raha te hahazo kinova mifandraika!
Tags: sary mihetsika gifmailaka gif mihetsikafehezan-dalànamailakafanekena mailakamenio fifanarahana mailakagif animated mailakasinga mailakamenus mailakamailaka fikosohan-tanana sy flipAtsimbadiho mailaka mailakasinga mailaka ifandraisanamailaka mamalyrangotra sy Atsimbadika